Mai Chibwe VekwaZimuto: Murume anovata nevarume iye ane mukadzi
Murume anovata nevarume iye ane mukadzi
MuUK mune vanhu vakawanda chose vanovata nevarume nevakadzi zvese zvokuti haatombozivi kuti anoda varume kupfuura vakadzi here kana kuti vakadzi kupfuura varume. Vanhu ava variko kwese kuvakadzi nokuvarume. Tikatarisa mabato evarume tinoona kuti kune
Varume vanoda vakadzi
Varumevanoda vamwe varume uye vakadzi
Varume vanongoda vamwe varume
Varume vasingadi zvese vakadzi kana varume
Mabato awa ari munyika dzese dzepasi pano saka usafunga kuti zviri kunyika iyo kana iyo chete. Asi kungoti dzimwe nyika zvinogamuchigwa saka vanozviita voitira pachena pasina zvokuvanza. Kwedu kuZimbabwe zvaionekwa kuti munhu uyu zvevakadzi haadi kuita ega mhuri yake yomukomberana vomutsvakira musikana vomukwesva nokumudzidzisa kugara nomukadzi kusvika angoitawo somurume ane musha. Varume vakadai vaingoonekwa sevanhu vasina CONFIDENCE yokunyenga asi achida vakadzi. Mazuvano munhu umwe chete iyeye ane zviito zvakadaro anokwanisa kuudzwa kuti anoda varume iye obva adawo varume. Zvongozobva pakuti avada kusvika pakadii kubva pamabato atataura awa.
Kutya kwakasiyana nokusvoda. Munhu anotya haatombodi kuvhengana nevakadzi. Anoona sevanhu vanoitisa ANXIETY kana anavo ega. Akazosara ari ega nomusikana umwe chete anowedzera kutya zvokuti anopedzisira atowana mukana wekutiza. Haana nyaya dzokutaura nomunukadzi.
Murume akadai anokwanisa kuva munhu anotya chitubu chomukadzi. Unohwa achitauta achiti Be*** kureva kuti mufungwa make anoona sezinhu zihombe rinoitisa maNightmare kuriona. pane kuti MHE*** kutaura nezita rayo rakapfava rinoratidza kuti chinhu chidiki chinotonetsa kupinda. Pamunhukadzi hapana chimwe chinhu chaunowana chine mazita maviri akangosiyana nekubva pakuti nyakutaura anofunga kuti isaizi ani. Chitubu chomukadzi zita racho pachiShona chinohi MHE**** kwete BE***. Ukahwa murume wako achishandisa BE*** ziva kuti ane fungwa dzechimwana chidiki dzokufunga kuti zinhu ziguru rinokwana mwana kubuda napo.
Usakangamwa kuti varume vakawanda vanofarira urume hwevamwe varume. Vakawanda vanohura nevakadzi vevanhu ipapo achitoziva kuti mukadzi uyu ane urume hwemurume wake mukati make, Kana asina matyira ekodhibha mudhibha rourume hweumwe chinozomutyisa pakubatsira shamwari yake kubudisa urume chii.
Vakadzi vakawanda vanofarira zvakasiyanawo. Kune
Vakadzi vanoda varume
Vakadzi vanoda varume nevakadzi
Vakadzi vanoda vakadzi
Vakadzi vasingadi zvese izvi.
Vakadzi vanokura vane ruzivo gwekuti pamberi hapabatwi uye hapana anofanira kupaona. Kunozoti wati kurei wotanga kuenda kumwedzi, ukashaya anonyatsokurondedzera mamirire ezvinhu, unokwanisa kukanganisika musoro. Kudzidza kuti kana ukaita murume unofanira kupinzwa chombo pamberi chinhu chinotyisa kana ukakasira kuudzwa kana kuti ukazozviziva wakurisa, wange usingazvifungiri. Kune vakadzi vanotya kupinzwa chombo zvokuti kana akatofunga kuti zvingangoitika, anokwanisa kuoma mutezo, zvobva zvawedzera kutadzisa murume kupinza. Ukuwo haanyorovi. Nyaya dzevanhukadzi panyaya iyi dzakawanda.
Koitazve vamwe vakadzi vanosvika pakuchiva chombo chomurume kusvika ada kuchiita iye. Kugarodembedemba kuti dai akazvagwa ane chombo. Saka haazvioni somunhukadzi asi somurume akazvagwa akaremara kureva kuti haana chombo asi murume. Ava vakadai kuti apinzwe chombo noumwe murume hazviiti. Iye ndiye anotoda kupinza chombo chiya chaasina mumukadzi saka anoda vamwe vakadzi. Yova Mental ILLNESS
Pakuvata nevamwe vakadzi hapana chinopinzwa saka anoona zviri nani kuda vakadzi pane kuda varume. Zvinonzi izvo muviri wemunhukadzi muviri wakapfava zvokuti vamwe vakadzi vanoona muviri weumwe mukadzi uchievedza kutarisa zvokuti anobva amuda kusvika pakuda kuvata naye nokumubatabata. Zvisingarevi kuti varume haachadi asi kuti anoda vese varume nevakadzi. Unokwanisa kunge uri mai vemba asi uku uchimbovata nevamwe mai vemba muchitonakigwa nazvo uku muchinakigwazve nevarume venyu. Inyaya inonetsa kuhwisisa
Kotizve vakadzi vanodhonzana matinji, vari vasikana. Unokwanisa kuzvijaira zvokuti unotozvitarisira. Koti ukadhonzwa noumwe ukahwa kunyorova zasi, unokwanisa kuita fungwa yokuti zvinonaka wozoti wakura woda kubatwabatwa noumwe mukadzi. Kwedu kuZimbabwe vashoma vanobatsirana kudhonza asi ndombohwa kuti kumaBOARDING SCHOOL zviriko.
Ukatarisa magarire edu unoona kuti kubva munhu ari rusvava aidzidziswa kuti murume here kana kuti mukadzi. Apazve wodzidziswa zvaunofanira kuita somurume kana mukadzi. Kuti uzoti uku wakura uri murume woda vamwe varume kana kuti wakura uri mukadzi woda vamwe vakadzi inyaya unonetsa vakawanda zvokuti vanopedzisira vongokutuka nokuti vashaya zvimwe zvokuita.
Pakukura kwedu taibika matakanana zvokuti kana pasina mukomana anoita baba munongoti umwe musikana chiita baba asi vakawanda vaizokura vachiziva kuti uyu musikana uyu mukomana.
Iwe somunhukadzi ukarongegwa kuroorana nomunhu asiri pabato iro rokutanga, zvinokunetsa kuti uzive kuti ndiyo nyaya iripo nokuti iye haakuudzi uye hapana anokuudza. Saka zviri nyore kupedzisira waroorana nomunhu akadai. Unotozoti magara mese kwenguva unoona kuti zviri kutaugwa nevamwe vakadzi vakawanikwa handizvo zviri kumba kwako, wombobvunzabvunza wozoona kuti nyaya yakatsveyama. Kana uri munhu anogutswa unokwanisa kusava nehanya nazvo wongorera vana vako uchiriritira murume wako sezvaari izvozvo. Asi pamwe zviito zvake zvinokutenderedza musoro kusvika wada kuongorora zvakadzama.
Unohwa sei kana une akadai?
Toti waroorana nomunhu anoda verudzi gwake. Inyaya inonetsa chose kuti iwe ne murume mumba wozvibata kuti murume wako ari kupinzwa chombo noumwe murume pasina chibharo, uye kuti ari kutozvida anotobvisira umwe murume bhurugwa ofongora opinzwa chombo okoigwa achitochemererawo pazviri, opiwa urume otenda uya umwe kuti waita basa shamwari ndanakigwa.
Kana kuti iye anokusiya mumba ondobvisigwa bhurugwa noumwe murume umumisira chombo opinza achitobatirirawo kuita sokuti mukadzi wake. Zvadaro otozadza umwe murume urume votofara kuti zvaita.
Kutobatana pamberi nokukisana nokumwa minyatso yavo. Iwe ugere kumba uri kuona TV wakamirira murume wako. Ozoti auya ovatazve newe. Musi waunozviziva unopera simba. Ndinohwa vakadzi vakawanda vanozviitigwa vanotaura kuti zviri nani kuita murume anohura noumwe mukadzi asi kuhura noumwe murume hauzivi pokutangira nokuti COMPETITION inonetsa pazviri.
Kana kuudza shamwari dzako kunokunetsa nokuti unoona zvichisvodesa. Kutaridza kuti iwe wakatadza kusarudza uye uri fuza zvokuti haukwanisi kuona murume akadai kuti akadai. Ipapo vese vakauya kumuchato wako uye shamwari dzako dzaienda nemi kumafirimu hapana kana umwe chete akakuyambira kuti murume uyu anokwanisa kuda vamwe varume. Asi zvinokudya moyo kuita sokuti imhosva yako kuti murume anoda umwe murume. Chero ukamubvunza hapana chaunohwisisa pazviri.
Murumewo kuziva kuti mukadzi wako anokwizana bhinzi nokumwa mazamu oumwe mukadzi nokukisana naye vasina hembhe zvinonetsa kuhwisisa zvokuti unoona sokuti pane chawakatadza. Varume vanonetseka futi nenyaya yokuti vanofuga kuti murume kuti ahi murume zvinobva pakuva nechombo. Kutoregwa mukadzi wako noumwe mukadzi zvinokwanisa kuitisa PSYCHOLOGICAL DISORDERS pamurume.
Kuzoti azive kuti sei mukadzi wake achida munhu asina chombo zvomutenderedza musoro.
Todii nazvo kana zvaitika?
Asi ngatihwisise kuti zviri kutoitika. Kana zvakuitikira iwe mumba mako ukatadza kuzvigamuchira, siyana hako noumwe wako uyezve enda kuCOUNSELLING unobatsigwa kuongorora nyaya yako usati tadanana noumwe munhu.
Hausiriwe wazvikonzera saka haukwanisi kuzvigadzira. Zvinokwanisa kukuvhundusa kusvika pakushaya CONFIDENCE zvokukunetsa kuzodanana noumwe munhu. Apa unenge wava kutya kusarudzazve uchifunga kuti sarudzo yako yakaipa.
Koitazve vamwe vanoona ungochani sechinhu chinoitigwa mishonga. Gadzikana hako hana. Hapana mushonga waitika uye umwe wako haana kuroiwa. Chinhu chaangofungawo kuita nokuda kwemakurire ake. Hazvinei nechimwe chawaita. Hauna kukanganisa kusarudza. Wakasarudza kubva pane zvake zaaikutaridza iye.
Ukataura nevakadzidza Psychology vanokuudza nyaya yakareba pakuhurigwa nomutoo uyu. Pano ndangodimurira kuti tizive kuti zvinoitika uye kuti unofanira kuzvitarisisa usati waroorana nomunhu wawasarudza, kuti zveshuwa anoda vakadzi/varume here.
Dzimwe nyaya dzinozotadzisa vanhu kuvatana zvakanaka dzinobva ipapa saka ongorora zvakanaka kuti munhu wako akadii muchine nguva yokurambana pasina anokunetsai.
Varume vakadai vakawanda here uye ungazviona sei kuti ndizvo zviri kuitika.
Zvinonzi kunyika dzakaita se Europe neAmerica 11% yevarume vese vanotombozama kuvata nevamwe varume.
Kwedu kunanaZimbabwe uko vashoma havo asi variko vanotokwanisa kutadza kuvata nomukadzi iri nyaya yokuti anoda umwe murume. Havasviki 2%
Vakambosangana nazvo taurai tidzidzisane.
Posted by Mai E Chibwe at 03:23
Izvi zvakora nekuti ngochani kuno ku Zim dzinowanda nekuda kwekusa gashirwa nevanhu.
15 August 2013 at 07:16
Kusagashigwa nevamwe kunokwanisa kuitisa kuti munhu anoda vanhu vakafanana naye avanze izvi asi ozokwanisa kuroorana nomukadzi/murume obva azounza matambudziko mumba nokuda kwekusasununguka kutaura kuti zvekugara nomukadzi/murume haazvikwanisi.
Iyi inyaya inonetsa chose nokuti vabereki vakawanda havadi kuudzwa kuti mwana wavo munhu akadai. Zvinogumbura uye vanoona sokuti vakoniwa kurera.
Chibereko chiri padivi
Kushaya hanya nemukadzi/murume wako
Kuvata nehama yausingazivi
Vabereki pamusha wemwana